Roidmi F8 Lite, awood iyo kala duwanaansho qiimo fiican | Wararka Gadget
Roidmi F8 Lite, awood iyo kala duwanaansho qiimo fiican
Luis Padilla | | Guriga, Reviews
Roidmi waxay soosaartay F8 Lite-ka fayadhowrka bilaa xadhigga ah, oo ah nooc aad ugu eg "walaalkiis weyn", Roidmi F8 Storm guuleyste ah, laakiin leh qiime aad u jaban. Iyada oo la adeegsanayo naqshad aad u taxaddar badan, kala duwanaansho ballaaran oo ay ugu mahadcelinayaan madaxyada kala duwan ee ay ku jirto, fudaydka weyn ee isticmaalka iyo madax-bannaanida weyn iyo awoodda faaruqinta, tan Roidmi F8 Lite wuxuu noqonayaa mid ka mid ah tixraacyada kujira qaybtiisa haddii aan eegno qiimaha lacagta. Waxaan isku daynay waana kuu sheegeynaa waxyaabaha aan dareensan nahay.
1 Naqshad qurux badan oo shaqeyneysa
2 Qalab Dhamaystiran iyo Noocyo cayiman oo cayiman
3 Nadiifinta iyo dayactirka fudud
Naqshad qurux badan oo shaqeyneysa
Roidmi waxay dooratay inay ku sii hayso isla naqshaddan F8 Lite sidii duufaankii F8, oo aniga ii muuqata guul. Waa faakiyuum nadiif ah oo fiilooyin la'aan ah, iyada oo aan lahayn qaababka "extraterrestrial" ee noocyada kale qaarkood, oo leh khadad aad u miyir qaba iyo naqshad casri ah iyo mid yar taas oo aynu ku leenahay canaasiirta aan u baahanahay, iyada oo aan la sii dhergin. Waxay ku dareen midabka buluuga ah "Sky Blue" taas oo siinaysa muuqaal aan caadi ahayn, laakiin haddii kale, way adag tahay in la kala saaro labada moodel.
Laakiin maacuunta noocan ah, naqshadeynta waa inaysan wax u dhimeynin howlaha aaladda, taasina waa sida saxda ah ee ay ku gaareen qalabkan nadiifinta faaruqinta ah. Naqshadeynta casriga ah ayaa sidoo kale kufiican qabashada faakiyuumka meel kasta ha ahaato iyada oo ay ugu mahadcelineyso xamili 270º ah oo kuu oggolaaneysa inaad u isticmaasho sidii nadiifiyaha caadiga ah ee faakiyuumka ah, ku dheji geesaha ugu badan ee aan la geli karin iyo waxaas oo dhan iyada oo aanad ku dhammaan garabka ama murugada. Sidoo kale waa guul in lagu bixiyo "kicinta" caadiga ah ee moodooyinka kaleHalkan badhan ayaa shidan, isla isla badhanka ayaa daminaya, oo leh badhan kale oo loogu talagalay qaabka "turbo". Inta ay faakiyuumka nadiifineyso, gacantaada u wareeji gabi ahaanba si xor ah si aad ugu dhaqaajiso faakiyuumlaha, ma aha inaad riixdo oo aad wax hayso.
Qalab Dhamaystiran iyo Noocyo cayiman oo cayiman
Ahaanshaha qaab "Lite" ah micnaheedu waa in la sameeyo iyadoo aan la helin astaamo qaarkood oo ah nooca "Top" (F8 Storm) oo ay ku jiraan, laakiin qalad ha ka dhigin maxaa yeelay waxyaabaha muhiimka u ah ayaa dhawraya. Xirmada ku jirta sanduuqa wax ka yar ma dhameystirna, taasi waa run, laakiin waxaa ku jira waxaad runti u baahan tahay 99% waqtiga: madax weyn oo leh fidiyaha si loogu isticmaalo nadiifinta faakiyuumka dhulka, madax yar oo loogu isticmaalo furaashyada, kuraasta gawaarida, kuraasta kuraasta iyo meelaha kale ee yar yar, shaandho dheeri ah oo lagu sii daro midka horey loogu soo daray qeybta weyn, salka iyo xeedho.
Madaxa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah rullaluistemadka wareega ee isbeddelka leh, oo la is weydaarsan karo, taasina waxay ka dhigeysaa in lagu nadiifiyo nadiifiyahan faakiyuumka ka nadiifsan kan nadiifiyaha caadiga ah ee wasakhda nuugaya oo keliya. Waxaan u xiiseynaa buraashka microfiber-ka labaad marka la barbardhigo Duufaantii F8, iyo nalka loo yaqaan 'LED light' ee madaxa si loo iftiimiyo meelaha iftiinka daran, sida sariirta hoosteeda. Dhaqdhaqaaqa madaxa ayaa u oggolaanaya faaruqinta inay isku bedbedasho iyadoo si fudud loo maroojinayo curcurka, adoo ka dhigaya gelitaanka geesaha mid aad u fudud, iyo sidoo kale fududaynta u kala goosha lugaha kuraasta. Qeybta ugu weyn culeysku waa 2,4Kg, oo noqda 1,3Kg markii loo isticmaalo mashiinka faakiyuumka gacanta.
Mashiinka dijitaalka ah ee dijitaalka ah ee illaa 80.000 kacaan daqiiqaddii ayaa siisa awood nuugid weyn, iyo baytarigeeda ku jira wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isticmaasho faakiyuumlaha ilaa 40 daqiiqo adoo isticmaalaya qaabka caadiga ah. Haddii aad isticmaasho qaabka "Turbo", ismaamulka ayaa hoos u dhacaya illaa 10 daqiiqo. Habka faakiyuumka caadiga ahi wuu ka badan yahay inta badan munaasabadaha, isaga oo ka tagaya "Turbo" qaabka loogu isticmaalo si gaar ah oo gaar ah, sidaa awgeed ismaamulka faakiyuumka ayaa ka badan inta ku filan in lagu nadiifiyo dabaq caadi ah. Dib u cusboonaysiinta faakiyuumku waxay si dhakhso leh uga socotaa eber illaa 100 laba saacadood iyo badh kaliya. Tilmaamaha LED wuxuu noo ogolaanayaa inaan ogaano batteriga haray wakhti kasta.
Waad ku mahadsan tahay taageerada birlabta waxaan uga tagi karnaa faakiyuumka nadiifinta mas'uul ahaan si ay diyaar ugu ahaato markasta oo aan u baahanahay, qaabkeeduna wuxuu ka dhigayaa in laga tago iyadoo la fiirinayo inaysan dhibaato ahayn, sidaa darteed marka aad u baahato, marin u helitaankiisu dhakhso yahay Ugu dambeyntiina, aaladahaani waa kuwo aragti ahaan loo arkaayo ama aad u joojineyso adeegsiga dartiis caajisnimada haysashada inaad raadiso, ku dhajiso, iwm. Waxaas oo dhan waa inaan ku darnaa a horumarsan afar shaandho, oo leh shaandhada HEPA iyo isbuunyo awood u leh inay soo nuugaan walxaha PM-O3, Taas oo aan kaga takhalusi karno 99% xasaasiyadda dusha nuugta, dib ugu soo celinta hawada la sifeeyay deegaanka. Haddii qof xasaasiyad ku qabo caarada guriga, wuxuu ogaan doonaa sida ugu habboon ee loo qiimeeyo tilmaamahan.
Nadiifinta iyo dayactirka fudud
Markaan fulino howlaha faaruqinta waxaan sii wadi karnaa inaan faaruqino haanta. Boorso noocaan ahi halkan kuma taalo, kaliya shaandhada ay tahay inaan nadiifino si nolosheeda ay u dheertahay inta suurtagalka ah (mid kale ayaa ku jira sanduuqa). Taangiyada wax lagu nadiifiyo waxay leedahay awood adeegsi buuxa iyo faaruqiisa waxaa lagu sameeyaa iyadoo la furayo daboolka hoose. Ahaanshaha taangi hufan waxaan si toos ah u arki karnaa haddii ay lagama maarmaan tahay in la faaruqiyo iyo in kale waxayna qaadataa wax ka yar hal daqiiqo in meesha laga saaro kaydka, faaruqiya oo ku celi meeshiisii.
Intaa waxaa dheer, kala-goynta dhammaan qaybaha nadiifinta saxda ah ee qalabka waa in lagu sameeyaa xilliyo, iyadoo ku xiran isticmaalkeeda. Waa habsocod aad u fudud oo qaata kaliya shan daqiiqo oo ka tagta faakiyuumlaha nadiifka ah ee aan nadiif ahayn si uu u sii wado isticmaalka maalin kasta. Ma jiro qalab loo baahan yahay, naqshadda qaybaha kala duwanna way oggolaanaysaa soo saariddiisa iyo meelaynteeda saxda ahba waa mid aad u fudud xitaa isku-xidhka guriga.
Mashiinka nadiifiyaha ee Roidmi F8 Lite wuxuu ku guuleystey inuu sameeyo la'aan cunsurro hoos u dhigaya kharashka faakiyuumlaha, laakiin aan dib u jarin waxa run ahaantii muhiimka ah. In kasta oo waxyaabaha ku jira sanduuqa aanay u dhammaystirnayn sidii moodelkii Duufaanta F8, haddana farqiga u dhexeeya qiimuhu wuxuu ka dhigan yahay in dad badan oo isticmaala moodeelkan moodeelka ahi ka badan yahay sidii ay filayeen. Awood nuugid weyn, maarayn aad u fudud iyo astaamo aad u fiican ayaa ka dhigaya mid ka mid ah nadiifiyaha faakiyuumka bilaa xadhkaha ah leh qiimaha ugu fiican ee lacagta suuqa ku jirta. Waxa kale oo ay leedahay dammaanad-5 sano oo ah mootada iyo 2 sano oo loogu talagalay qaybaha. Qiimaheeda Amazon waa € 199 (isku xirka) kaas oo sidoo kale ah barta rasmiga ah ee iibinta Ziclotech, qaybiyaha rasmiga ah ee Spain oo aan markaa lahaan doonno dammaanad rasmi ah.
Wax kicin hawlgal ah
Dammaanad 5 sano ah oo ku saabsan mootada
Laydhka nalka hore ee guriga ma jiro
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Roidmi F8 Lite, awood iyo kala duwanaansho qiimo fiican
Weligaa Qiimayaasha Qiimayaasha Ha Arkin Amazon illaa Noofambar 12
Maxaa laga daawan karaa Netflix, HBO iyo Movistar + bisha Nofeembar